कोरोनाभाइरसको नालीबेली : विज्ञानले अहिलेसम्म केके पत्ता लगायो ? – Kanika Khabar
कोरोनाभाइरसको नालीबेली : विज्ञानले अहिलेसम्म केके पत्ता लगायो ?
Kanika Khabar ८ असार २०७७, सोमबार १७:२६ June 25, 2020 मा प्रकाशित
जब विश्व सन् २०२० को आगमनमा उत्सवको तयारीमा जुटेको थियो, त्यतिबेला चीनको ऊहान सेन्ट्रल अस्पतालका आपतकालीन विभागका डा। ली वेनलियाङ्गले सातजना यस्ता बिरामी फेला पारे जो फोक्सोको बिमारी ‘निमोनिया’ बाट पीडित थिए । ती सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखियो ।
३० डिसेम्बरमा आफ्ना सहकर्मीसँग प्राइभेट वीच्याट म्यासेजिङ्ग एपमा डा। लीले ‘सार्स’ ९सिभर एक्यूट रिस्पेरटरी सिन्ड्रोम० को नयाँ चरण आएको हो कि भन्ने आशंका जनाए ।
यद्यपि डा। लीले जुन बिमारीको पहिचान गरेका थिए, त्यो सार्सको दोस्रो चरण थिएन, त्यो त कोभिड–१९ ९सार्स–कोभ–२० को पहिलो चरण थियो ।
चिनियाँ मिडियाका अनुसार आफ्ना सहकर्मीसँग यो बिमारी फैलने चेतावनी दिएको तीन दिनपछि डा। लीलाई प्रहरीले आठजना अन्यका साथ अफवाह फैलाएको आरोपमा हिरासतमा लियो ।
काममा फर्किएपछि डा। ली कोभिड–१९ बाट संक्रमित भए । ३४ वर्षीय लीको फेब्रुअरी ७ मा मृत्यु भयो । परिवारमा उनकी गर्भवती पत्नी र एक छोरा छन् ।
कोभिड–१९ को रोकथामको दृष्टिमा सबैभन्दा सफल मुलुक ५।१ करोड जनसंख्या भएको मुलुक दक्षिण कोरिया नै साबित भएको छ । दक्षिण कोरियाले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको पत्ता लगाउन एउटा सानो सेना नै तयार ग¥यो, यही नै उसको सफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्यो ।
महामारी रोग विशेषज्ञ डा। एमा हुडक्राफ्ट ‘नेक्स्टस्ट्रेन’सँग काम गर्छिन् । ‘नेक्स्टस्ट्रेन’ वैज्ञानिकहरु र जीनोम डिकोड गर्ने विज्ञहरुको समूह हो जसले जीआइएसएआइडीमा अपलोड दशौं हजार जीनोम सिक्वेन्सबाट अहम् जानकारीलाई एकत्रित गरेर एक ‘ओपन सोर्स म्याप’ तयार गरेको छ । यो म्याप एक प्रकारले विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको बदलिँदो जीनोमको रियल टाइम ‘स्न्यापशट’ हो ।
डा। हुडक्राफ्ट भन्छिन्, ‘मानिससँग कुरा गर्नुभन्दा उत्कृष्ट विकल्प भाइरसको जीनोमलाई ट्रयाक गर्नु हो । मानिसहरु सायद आफू कहिले संक्रमित भएँ र कहाँबाट संक्रमित भएँ भनेर भन्न सक्दैनन् । यस्तोमा जीनोम डेटा धेरै विश्वसनीय हुन्छ । खासगरी इरानजस्तो देशका सम्बन्धमा, जहाँबाट धेरै कम जानकारी आइरहेको हुन्छ ।
जनवरीको अन्त्यमा डा। हुडक्राफ्ट र नेक्स्टस्ट्रेनको टिमको ध्यान ती नमूनामा गयो जसको जीनोम निकै हदसम्म मिल्दोजुल्दो थियो । ती जीनोममा हुने परिवर्तन पनि समान थिए । तर ती नमूना विश्वका अलग अलग देश– अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन र नेदरल्याण्डबाट लिइएको थियो । पहिलो नजरमा ती नमूनाको जाँच गर्नासाथ रातो रङ भएका नमूना कहाँबाट आयो भन्नेबारे टिमले पत्तो पाएको थिएन ।
ब्रिटिश सरकारको आपतकालीन साइन्टिफिक एडभाइजरी समूह ९एसएजेई० का अनुसार केही प्रमाण यस्ता छन्, जसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि बालबालिका संक्रमित हुने आशंका कम हुन्छ । उनीहरु संक्रमित भइहाले पनि उनीहरुबाट संक्रमण फैलने खतरा पनि कम हुन्छ । यद्यपि यी प्रमाणकै आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्न नहुने उक्त समूहको भनाइ छ ।